Ogaden News Agency (ONA) – Warbixin – Isku-daygii Itobiya inay joojiso Banaabaxa oo guuldaraystay iyo guusha ay soo hooyeen jaaliyadda JOKA
Warbixin – Isku-daygii Itobiya inay joojiso Banaabaxa oo guuldaraystay iyo guusha ay soo hooyeen jaaliyadda JOKA
Posted by ONA Admin	/ March 19, 2014
Jaaaliyada Ogadeniya ee wadanka Koonfur Africa ayaa Aqalka baarlamaanaka Africa ee magaaladaJohannesburg(Pan African Parliament ) ku qabtay banaanbax weyn. Banaana baxayaasha oo kasoo kicitimay magaalooyinka johsnnesburg iyoPretoriaiyaga oo gaadiid intiisa badan dusha banaana oo Calamaan Iyo calaamado baalaha ka babnayay ayaa dad waynahii wadooyinka marayay dhamaan tood ku soo jeediyay arintan.
Sawaxanka boodhadhka Iyo bildhaanta-guud ee bananabaxa-yaasha waxay jeediyeen dareenkii wufuud badnad oo kuqul qulaysay goobta shirka waxaana isa soodhoobay suxufiyiin Iyo dad xuquuqda Adanaha udooda oo wakhti dheerna laqaatay banana-baxayaasha.
Iyadoo bananabuxu si wanaagsan u guulaysatay ayay hadana arintani ahayd mid aan sahal ku imaanin iyadoo safarada Ethiopia Iyo dadkale oo lashaqaynayay ay adeegsadeen waxkasta oo suura tagalinaya in ay si uun u carqaladeeyaan mudaharadka. Ugu horayntii waxay isku dayeen in ay bananabaxa is hortaagaan, waxay na qoreen waraaq iyagoo adeegsana magaca Baarlamaanka Africa kuna diidayaan in goobta wax banaanbax ah lagasameeyo . markii arintaas u hirgali wayday waxay iskudayeen inay badalaan goobta bananbaxa-yasha loo asteeyey iyagoo dalbaday in jaho kale lageeyo banana- baxayasha taas oo iyana suuro gali weynday . Inataas kadib dagaalku wuxuu noqday mid soo shaac baxay waxaana sitoos ah isu hardiyay xubno bilayska dalka katirsan oo la soo riixay Iyo garyaqaanka Jaaliyada Ogadenya oo isna ku lugyeeshey hardanka.
Si hadaba hoos loogu dhigo samaynta mudaharadka ayay qorsheeyeen in aan laqaadin waraaqda cabashada ah ee Jaaliyadu u gudbinaysay. Dhanka kale Jaaliyada ayaa iyaduna dhankeeda badashay tabaheedii ay kurabtay in saamaynta isu soo baxani aad u waynaado waxaana gudaha u galey shirka xubno ka mid ahaa jaaliyadda oo halkaa ku qaybiyey waraaqihii cabashada ee ay qorsheeyeen in aan la arkin iyadoo ergaykasta oo shirka fadhiyay miiskiisa ugu tagtay warqadii cabashada Iyo codsigii dadka Ogaadeeniya.
Intaas kadib markuu fashilmay iskudaygii lagu doonayay in banaanbaxa lagu afduubo waxay xaaladu ku cakirantay wufuudii Ethiopian -ka waxayna miciin bideen inay dhuuntaan oo ay qariyaan xataa joogitaan-kooda shirka. Waxaa xusid mudan in R/wazarihii Ethiopia uu si lama filaan ah u joojiyay socdaalkii uu kaga qayb galilahaa shirka, taasbadalkeedana uu soo diray ku-xigeenkiisa Iyo wafdi kale oo lasocda. Wafdiga Ethiopia oo ay ahayd inay jeediyaan khudbada 3aad ee kulanka 4aad ee PAP hayeeshee waxay si kadis ah ugu wargaliyeen shir-gudoonka in aysan hadlaynin islamarkii looyeedhay in ay hadlaan. Raysal wasaaraha Ethiopia Iyo dhuumashada wafdigii uu isku badalay xidhiidh toos ah lalahayd mudaharaadka Iyadoo 50 madaxwayne African ku kulansanaayeen xaafada Midrand lana filayay in Ethiopia saamayn weyn kulahato.
Kulanka ayaa ahaa sannadguuradii 10 aad ee ka soo wareegtay aas aaskii PAP, ma’aha markii ugu horraysay ee ay Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfur Africa ay madax Ethiopia kasocota ka caydhiso shircaalami ah sida ay shaacisay wakaalada waraarka ee AA. Sannadkii 2012 kii waxay Jaaliyada Ogadeniya sababtay in uu Meles Zanawi ka cararo jaamacadda UNISA ee magaalada Johannesburg khudbad uu kajeedin lahaa kadib markii ay Xubnha JOKA gudaha Jaamacada galeen .
Sidaas si lamid ah sannadkii tagay 2013 ayay dublumaasiyiin Ethiopian ahi ka dudeen shir diblamaasiyadeed oo ay siwadajir ah usoo qaban qaabiyeen wasaarada arrimaha dibadda ee South Africa Iyo Safaarada Dalka Norway shir kaas oo lagaga hadlayay xaaladda daganaanshaha ee Soomalia laguna casuumay dalalka kulug leh Siyaasada Soomaliya ayay wafdigii Ethiopian-ku waxay kabaxeen shirka kadib markii ay ogaadeen in JOKA masuuliyiin kasocda ay khudbad kajeedin doonaan shirka. Isla sankii tagay ee 2013 waxay xukuumada Ethiopia ku eedeysay Safiirkeedii South Africa inuu ku guuldaraystay in uu is hortaago fititaanka Siyaasadeed ee JWXO, waxaana Safiirkii loo badalay dalka Burkino Faso.
Isku soo tuuboo waxaa muuqata in dadaalkii Jaaliyaadka Ogadeniya ee dunida dacaladeedu dhaliyaan guulo wax ku ool ah loona bahanyahay in lasii laba jibaaro.
Daawo sawiradan Qiimaha leh:
Mashaa Allah Joka, waxaan idin leeyahay guulesta halkiinana kasii wada. Waxaad tihiin hurmuudka jaaliyadaha Ogaadeeniya. GUUL IYO GOBONINO INSHAA ALLAH.